အ မေ အ မေ ၆၅ လက်ဆောင်
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, June 19, 2010 Links to this post
ကျမ တို့ ခေါင်းဆောင်ပြောတဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ပဲ ကျမတို့ လိုချင်ပါတယ်
All We Want is Our Freedom by DASSK _Bur Trans
ရဲ ရဲ တောက် အမေ
အမေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သို့ သုံးရောင်ခြယ် သား/သမီးများမှ အမှတ်တရ
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် မဲဆောက်တွင် (၁၄)ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံအမျိူးသမီးနေ့ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခြင်း အခမ်းအနား ဓာတ်ပုံသတင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၆၅) နှစ်မြောက် မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့မိသားစုဘ၀ ဖြတ်သန်းမှု အမှတ်တရပုံများအား ဖေါ်ပြအပ်ပါတယ်။
၁၉၇၄ ခုနှစ်၌ ရန်ကုန်မြို့ ရှိ မိခင် ဒေါ်ခင်ကြည်ထံ ပထမဦးဆုံး မိသားစုလိုက် ပြန်လည် အလည်သွား
ရောက်စဉ် အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ အဖွားဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ကြည်မှ မြေးဦးဖြစ်သူ အလက်ဇန္ဒားခေါ် မောင်မြင့်ဆန်းအောင်အား ချီပိုးထားစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ထပ်မင်္ဂလာအခမ်းအနား ဧည့်ခံပွဲအပြီး လန်ဒန်မြို့ ရှိ မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ အိမ်တွင် တွေ့မြင်ရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၇၂ ခုနှစ် နှစ်သစ်ကူးနေ့ တွင် မောင်နှံနှစ်ဦးရဲ့အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၇၀ ခုနှစ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါ ဓါတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူခွင့် ရှိခဲ့တာတောင် ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး ယခုလက်ရှိတိုင် မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား သားဖြစ်သူ အလက်ဇန္ဒားခေါ် မောင်မြင့်ဆန်းအောင်နှင့်အတူ တွေ့ မြင်ရစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ခင်ပွန်းဖြစ်သူ မိုက်ကယ်အဲရစ်၊ သားငယ်ဖြစ်သူ ကင်မ် ခေါ်မောင်ထိန်လင်း တို့ နှင့်အတူ တွေ့ မြင်ရစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။
(မြန်မာပြည်သူတွေ ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် စွန့် လွှတ်အနစ်နာခံမှုပေါင်းများစွာနဲ့ကိုယ်ကျိုးစွန့်ဆောင်ရွက်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ပွန်းသည် မိုက်ကယ်အဲရစ် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန် ကွယ်လွန်သည့်အချိန်မှာလည်း မတွေ့ ဆုံလိုက်ရပါ။ ယခုအချိန်ထိလည်း သူမ၏သားနှစ်ဦးနဲ့လည်း ကွဲကွာနေရတဲ့အချိန်တွေ နှစ်တွေချီနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ၏ဘ၀တစ်ခုလုံးကို ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကနေ စပြီး ယခုအချိန်ထိတိုင်အောင် မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ပေးဆပ်စွန့် လွှတ်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်)။
ပြည်သူ့ အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပြည်သူတွေနဲ့တစ်သွေးထဲ တစ်သားထဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပြည်သူကို ချစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။
ဓာတ်ပုံများအားပေးပို့ ပေးသော ကိုတိုးလွင် နှင့် ကိုနစ်နေမန်း အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, June 18, 2010 Links to this post
အများပြည်သူ (ပြည်တွင်း ပြည်ပ)မှ လှူဒါန်းထားသော အလှူငွေများဖြင့် အများပြည်သူ အတွက် ရေတွင်း (အ၀ီစိတွင်း) တူးဖော်ပေးခြင်း၊ အုတ်ရေကန် တည်ဆောက်ပေးခြင်း၊ ရေစုပ်စက် မော်တာများ တပ်ဆင်ပေးခြင်း တို့ကို နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ လက်ဆင့်ကမ်း ကုသိုလ်ယူ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ရာ ယခုဆိုလျှင် ပြည်မြို့နယ်ရှိ ရေဒုက္ခကျရောက်နေသော ဇီးကုန်းလေးကျေးရွာ၊ မကျည်းစုကျေးရွာ၊ သက်ကယ်ချင်း ကုန်းကျေးရွာ တို့တွင် ရေရှည်စီမံကိန်းဖြစ်သော ရေကုသိုလ်လုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော် ပြီးစီးသွားပြီ ဖြစ်ပါ၍ အများပြည်သူအပေါင်းတို့မှ သာဓု ခေါ်ဆိုနိုင်ရန် တင်ပြလိုက်ပါသည်။
ဆက်လက်၍ ဒလမြို့နယ်၊ ပဲခူးမြို့နယ်၊ ပြည်မြို့နယ် စသည့် ရေဒုက္ခသည်များထံသို့ ရေရှည် ကုသိုလ်အလုပ်မျိုးဖြစ်သော အ၀ီစိ တူးဖော်ခြင်း၊ အုတ်ရေကန် တည်ဆောက်ပေးခြင်းတို့ကို နယ်ခံ ပရဟိတ လူမှုရေးမျိုးဆက်သစ်များနှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)တို့ ပူးပေါင်းကာ ဆက်လက်၍ လုပ်ဆောင် ပေးဆပ်လျှက်ရှိပါသည်။ မိုးကျပြီဖြစ်၍ အ၀ီစိ တူးဖော်ခြင်း၊ အုတ်ရေကန် တည်ဆောက် ပေးခြင်းတို့အတွက် ရေတူး စက်ကိရိယာများ၊ အုတ်ရေကန် တည်ဆောက်ရန် အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက်၊ ဘိလပ်မြေ စသဖြင့် ကုန်ကြမ်းများအား အချို့ဒေသများကို သယ်ဆောင် သွားလာရာတွင် ကုန်းလမ်းခရီးဖြင့် မသွားနိုင်တော့ချေ။ ရေလမ်းခရီးကို လှေဖြင့် ခဲရာခဲဆစ် ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းများကို သယ်ယူ ပို့ဆောင် တူးဖော် တည်ဆောက်ပေးခြင်းတို့ကို နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) အနေဖြင့် တက်နိုင်သလောက် စွမ်းအား ဥာဏ်အား ၀ီရိယအားတို့ဖြင့် ပေးဆပ်လျှက် ရှိပါသည်။
၂၀၁၀ ကိုကျော်သူ၏ လူမှုရေး တတိယခြေလှမ်း
၂၀၁၀ လူမှုရေး တတိယခြေလှမ်း
၃/၂၀၁၀ ဈာပန ပို့ဆောင်ရေးသင်တန်းအား နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အသင်းသူ အသင်းသား အသစ်များအား ၁၇ - ၆ - ၂၀၁၀ (ကြာသပတေးနေ့)တွင် နံနက် (၉း၀၀) နာရီမှ ညနေ (၃း၀၀) နာရီအထိ အသင်း၏ ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူ၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးဇင်ထွန်းအောင်၊ ပြန်ကြားရေးဌာနမှ ဒေါ်မေဇွန်ဦး တို့မှ သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။
ယင်း သင်တန်းအား (၁) လ တိတိ ပို့ချမည် ဖြစ်ပြီး၊ နောက် ဖျတ်ခနဲပေါ် ဆတ်ခနဲလုပ် (ဓါတ်ပုံသင်တန်း)နှင့် သရုပ်ဆောင်သင်တန်း (လူမှုဆက်ဆံရေးသင်တန်း)ကို ဆက်လက် တက်ရောက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ မျိုးဆက်သစ် လူမှုရေးသင်တန်းသည် ယခုဆိုလျှင် တတိယမြောက်သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ သင်တန်းများ ပို့ချသင်ကြား ပေးခြင်းသည် နာရေးကူညီမှု လူမှုရေးလုပ်ငန်းရပ် တစ်ခုတင်မက ပြည်သူလူထု လိုအပ်မှုများကို ဖြည့်ဆည်း ပံ့ပိုး ကူညီမှုများ လုပ်နိုင်ရန် အတွက်၎င်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေး ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စေရန် ၄င်း၊ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ပြီး သီလလုံခြုံသော အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ် ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ ပေါ်ထွက်လာရန် ရည်ရွယ်၍ အတွေ့အကြုံများကို ရှင်းလင်းတင်ပြ ပို့ချပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်း သင်တန်းတွင် မျိုးဆက်သစ် သင်တန်းသူ/သားများမှ မိမိတို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)တွင် လုပ်အားပေးခြင်း၊ ပြည်သူလူထုအပေါ် ပေးဆပ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ မိမိတို့၏ ခံစားချက်များ ဆန္ဒများအား တစ်ဦးချင်း ဖော်ထုတ် ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။
မော်ကွန်းဝင် ဗိုလ်မှူး မင်းလွင် ၏ ဈာပန ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း
ဗိုလ်မှူးမင်းလွင် (ငြိမ်း) (ဒါးပိန်မြို့)၊ လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်းဝင် (ပထမဆင့်)၊ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည် (ပထမဆင့်)၊ ဦးစီးအရာရှိ(ပ) ပညာသည်(ငြိမ်း)၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း။ အသက် (၈၈) နှစ် သည် ၁၅.၆.၂၀၁၀ (အင်္ဂါ) နေ့တွင် ကွယ်လွန်သွားပါသဖြင့် ကွယ်လွန်သူ၏ ဆန္ဒအရ ၁၆.၆.၂၀၁၀ (ဗုဒ္ဓဟူး) နေ့ ညနေ (၃း၀၀) နာရီတွင် ဗဟန်းမြို့နယ် ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံမှ ရေဝေးသုဿန်သို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူကိုယ်တိုင် နိဗ္ဗာန်ယာဉ်အား မောင်းနှင်၍ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ အသင်းသားများက မိသားစုနှင့် အတူ လိုက်လံပို့ဆောင် မီးသဂြိုင်္လ် ပေးခဲ့ကြပါသည်။
ကိုမော်ကြီး(ကိုမော်မင်းလွင်) နှင့် ကိုအောင်(ကိုအောင်ကြီးလွင်) တို့၏ ဖခင် ဗိုလ်မှူးမင်းလွင် (ငြိမ်း) (ဒါးပိန်မြို့)၊ လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်းဝင် (ပထမဆင့်)၊ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည် (ပထမဆင့်)၊ ဦးစီးအရာရှိ(ပ) ပညာသည်(ငြိမ်း)၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း။ အသက် (၈၈) နှစ် ကွယ်လွန်သွားခြင်းအား မြတ်လေးငုံ မှ မိသားစုနှင့် ထပ်တူထပ်မျှ အထူးဝမ်းနည်း ကြေကွဲ ရပါသည်.။
ဓာတ်ပုံ များပေးပို့ ပေးသော ကိုကျော်သူ အားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်.။
၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် အရှင်ဂမ္ဘီရ၏ ကျရောက်သော ဇွန်၁၉ ရက်နေ့တွင်(၃၁) နှစ်မြောက် မွေးနေ့အမှတ်တရ အထိမ်းအမှတ် သ၀ဏ်လွှာ။
ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့ တွင် ကျရောက်မည့် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် အရှင်ဂမ္ဘီရ၏ မွေးနေ့အတွက် -
အမှန်တရားအတွက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထောင်တွင်း၌ အကျဉ်းကျခံနေရသော အရှင်ဘုရားအား အရှင်ဘုရား၏ မွေးနေ့မင်္ဂလာ အခါသမယမှာ အရှင်ဘုရားနဲ့အတူ ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားရပါကြောင်း၊ ဘုရားတပည့်တော်တို့အဖွဲ့မှလည်း အရှင်ဘုရား၏ မွေးနေ့ပွဲ၌ အရှင်ဘုရားနှင့်အတူ ထောင်တွင်း၌ အကျဉ်းကျခံနေရသော ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအပေါင်းတို့ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြ၍ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေဟု ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။
(၂၀၀ရ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင် အရှင်ဂမ္ဘီရရဲ့မွေးနေ့ နဲ့လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်တို့ ရဲ့ မွေးနေ့ ဟာ ရက် တူပါတယ် - ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်)။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်ဂုဏ်ပြုသီချင်းများနှင် သူမ၏စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်ရုပ်သံများပြန်လည်တင်ပြပေးခြင်း..
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, June 17, 2010 Links to this post
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ဗဟိုသတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာနမှ ဖြန့်ချိပါသည်၊
ပြည်သူ့ အင်အားနဲ့နအဖအာဏာရူးတို့ ရဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ကြစို့- With The Power of People, We boycott the SPDC’s 2010 Elections!
နအဖရဲ့ကိုယ့်အကွက် ကိုယ်ထွင်ထားတဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲရုံသရုပ်ပြပွဲကို ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့က ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် အ.ထ.က(၁) ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဒီရွေးကောက်ပွဲ မဲရုံသရုပ်ပြပွဲကို နအဖလက်ကိုင်ဒုတ် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ သိန်းစိုးနဲ့အဖွဲ့ ဝင်တွေ ကြည့်ရှူလမ်းညွှန်ခဲ့ကြပြီး သူတို့ခိုင်းစေထားတဲ့သူတွေက ဆန္ဒမဲပေးတဲ့ ပုံစံများတွေနဲ့သရုပ်ပြသခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
နအဖရဲ့၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲရေတွက်ရာမှာ ဆန္ဒမဲများပေးပြီးပါက မဲရုံမှူးတွေက အများပြည်သူရှေ့မှောက်မှာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တွေကို ရေတွက်ရမယ်တဲ့။ ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ မဲရုံတွေကို မနက် ၆ နာရီကတည်းက စဖွင့်မှာဖြစ်ပြီး ညနေ ၄ နာရီတွင် ပိတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
နအဖတွေ ပြောပြောနေတဲ့ “အများပြည်သူရှေ့ မှောက်မှာ ဆန္ဒမဲတွေ ရေတွက်ရမယ်” ဆိုတာ သူ့ လူနဲ့ သူ လက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီး မဲတွေရေတွက်ပြမယ်၊ ပြီးရင် သူတို့ ရဲ့ မီဒီယာကနေ မဲတွေ ဘယ်လောက်ရပါတယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေ လွှင့်မယ်၊ ဒါမျိုးတွေနဲ့မဲလိမ်ပြနေတာ ကြာပါပြီ။
မြန်မာပြည်ရဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့ နေရာဒေသက ပြည်သူတွေရဲ့ မဲတွေ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံစက်ရုံတွေမှာ ခြိမ်းမြောက်ပြီး ကောက်ယူတဲ့ မဲတွေ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ကြိုတင် ကောက်ယူထားတဲ့ မဲတွေ၊ အစရှိတဲ့ မဲတွေကိုတော့ ဖျောက်ပြီး မဲလိမ်ပါဦးမယ်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်က ပြည်သူတွေ မဲပေးခဲ့ကြတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ် ပါဝင်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ်ကို ထောက်ခဲမဲတွေ တစ်ခဲနက် ပေးခဲ့ကြတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နအဖရဲ့အတုအယောင် ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချူပ်ပုံဥပဒေအတွက် မဲပေးကြရတဲ့အခါမှာ နအဖက သူတို့ဖာသာ အကွက်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်း ပေးခဲ့ကြတဲ့ မဲတွေကို ထောက်ခံမဲအဖြစ် ဖန်တီးယူပြီး ဒီ နအဖဖွဲ့ စည်းအုပ်ချူပ်ပုံကို ဗြောင်လိမ်ပြီး အတည်ပြုခဲ့ကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တုန်းက အပြည့်အ၀ မဲပေးခဲ့ကြတာကို တွက်ဆပြီး နအဖက အခု ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီလို ဖြစ်အောင် ပြည်သူတွေကို မဲမပေး ပေးအောင်၊ မဲပေးလာအောင် သူတို့လိုချင်တဲ့ အကွက်ဆင်ထဲ လှည့်ဖြားသွင်းနေပါတယ်။
အခု နအဖအာဏာရူးတွေကို တရားဝင်အစိုးရဖြစ်အောင် ဖန်တီးယူမယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲပေးကြရမယ်ဆိုရင် ပေးတဲ့မဲ ကန့် ကွက်မဲဘဲဖြစ်ဖြစ် ထောက်ခံမဲဘဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးမှာ နအဖအာဏာရူးများနဲ့လက်ပါးစေများသာ သီးသန့် ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေက အနိုင်ရတယ်ဆိုပြီး နအဖ ယူနီဖောင်းနဲ့အရပ်ဝတ်အစိုးရအတု ဖြစ်တော့မှာ သေချာတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ မဲပေးပြီး ကန့် ကွက်မဲ (Vote No) ပေးရမလား ဒါမှ မဟုတ် မဲမပေးဘဲ (No Vote) နေရမလား ဆိုပြီး ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်နေရမယ့် အချိန်မဟုတ်တော့ပါဖူး။ မဲများ မပေးလိုက်မိရင် ငါတို့ မပေးလိုက်ဘဲ သူ့ တို့ လူနဲ့သူတို့ ပေးတဲ့ မဲတွေနဲ့ များ အနိုင်ရသွားမလားဆိုပြီးတော့လည်း စိုးရိမ်နေရမယ့် အနေအထား မဖြစ်သင့်ပါဖူး။ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ မဲပေးပြီး ကန့် ကွက်လည်း အဲ့ဒီ ကန့် ကွက်မဲအရေအတွက်က မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ထွက်ပေါ်လာမှာ မဟုတ်ပါဖူး။
ဒီ နအဖရဲ့၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ သူ့ ဖာသာ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေထုတ်၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို သူ့ လူ သူခန့် ၊ သူ့ လူနဲ့ သူ မဲရုံဆောက်၊ သူ့ လူနဲ့သူ မဲရေတွက်၊ သူ့ လူကို သူတင်ပြီး ပြည်သူတွေ ကန့် ကွက်မဲပေးလည်း ဘာမှထူးမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အဖြေ ရှင်းရှင်းကြီးပါဘဲ။
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ အလုပ်သမားဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ လည်း နအဖတွေက ခြိမ်းခြောက်ပြီး မဲဆန္ဒအတင်းပေးခိုင်းတာ ကြိုတင်မဲတွေ ပေးခိုင်းရင် တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး အာဏာရူးများရဲ့လက်အောက်မှာ ဆက်လက်ဖိနှိပ်ခံမနေရဖို့ အတွက် မိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့နည်းများနဲ့နအဖ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ပေးကြပါလို့အထူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ စုစုစည်းစည်းနဲ့တိုက်ရမယ့်ပွဲကတော့ “ နအဖရဲ့၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို လုံးဝ သပိတ်မှောက်ကြဖို့ ပါ”။
နအဖအာဏာရူးတွေ တရားဝင်အစိုးရအဖြစ် အသွင်ပြောင်းဖို့အသည်းအသန်လုပ်နေတဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ပြတ်သား ရဲရင့်သော ဆုံးဖြတ်မှုနဲ့အလျဉ်း မဲမပေးဘဲ သပိတ်မှောက်ကြပါစို့ လို့အမျိုးသားရေးအဖြစ် အနူးအညွတ် တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။
စစ်တွေနှင့် မန်စီ ကားလမ်း အကြားတွင် တည်ရှိသော သဲချောင်းကျေးရွာကို လေဆင်နှာမောင်း တိုက်ခတ်မူကြောင့် ရွာလုံးကျွတ် ပြိုပျက်
စစ်တွေမြို့နယ်မှ ကျေးရွာ တရွာကို လေဆင်နှာမောင်း တိုက်ခတ်သွားသဖြင့် အိမ်ခြေ အများအပြား ပျက်စီးသွားပြီး ကျေးရွာသား တဦး ပျောက်ဆုံးနေကာ နောက်တဦးမှာ ဒဏ်ရာ ရရှိသွားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့ ညဉ့် ၁၁ နာရီခန့်တွင် စစ်တွေနှင့် မန်စီ ကားလမ်း အကြားတွင် တည်ရှိသော သဲချောင်းကျေးရွာကို လျှပ်တပြက် လေဆင်နှာမောင်း ၀င်ရောက် မွှေနှောက်သွားခဲ့သည်။
ကျေးရွာသား တဦးက “ လေဆင်နှာမောင်းတိုက်တာက ၃ မိနစ်ဘဲ ကြာပါတယ်။ လေလာတာက တော်တော်ပြင်းပါတယ်။ တခါမှ မတွေ့မမြင်ဖူးပါဘူး။ အိမ်ခြေ ၃၆ လုံး ပျက်စီးသွားပြီး မူလတန်း ကျောင်းနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းလည်း ပျက်စီးတဲ့ အထဲမှာ ပါဝင်သွားပါတယ်။ ခုချိန်ထိတော့ ကိုကျော်နိုင်က ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်မူကြောင့် မိသားစု ၁၇ စု အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်သွားပြပီး ယခုအခါ မောင်လူပျိုကြီး ဆိုသူကို အတွင်းလူနာအဖြစ် ဆေးရုံတင်ထားရသည်။“ သက်ဆိုင်ရာ လာကြည့်ရုံကလွဲပီး အကူအညီတွေတော့ မပေးသေးပါဘူး။ ရွာသားတွေက ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုးပီး အိမ်တွေ၊ ကျောင်းတွေကို ပြန်ပြင်နေရပါတယ်။ မိသားစု အတော်များများကတော့ ဆင်းရဲအတွက် အိမ်တွေကို ပြန်မပြင်နိုင်သေးပါဘူး” ဟု သူက ပြောသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏(၆၅)နှစ်မြောက်မွေးနေ့အမှတ်တရ ဘဘဦးဝင်းတင်လက်ဆောင်
ဤဓာတ်ပုံ အားပေးပို့ ပေးသော ပြည်တွင်းမှ သူငယ်ချင်း ကင်ရို အားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်.။
သံလျင်တံတားပေါ်တွင် ခရီးသည်တင် ကားသစ်တစ်စီး မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
သံလျင်တံတားပေါ်တွင် ခရီးသည်တင် ကားသစ်တစ်စီးမီးလောင်မှု ဖြစ်စဉ်ကို ဇွန်လ ၁၅ရက်နေ့ ညနေ ၄နာရီ ၀န်းကျင် အချိန်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူသေဆုံးမှုနှင့် ဒဏ်ရာရှိမှု မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာ သီလ၀ါ ဆိပ်ကမ်းဘက်မှ ရန်ကုန်မြို့တွင်း အလာ သံလျင်တံတား ရေလယ်တိုင်အမှတ် ၆ အနီးတွင် အဆိုပါ ခရီးသည်တင်ယာဉ် ကားသစ်တစ်စီး မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့် သံလျင်တံတားကိုဖြတ် မောင်းသွားလာလျက်ရှိသည့် အဆင်းအတက်ကားများ အချိန် အတော်အတန်ကြာ တက်ဆင်းခွင့် မပြုခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။မီးလောင်မှုဖြစ်ခဲ့သော ခရီးသည်တင်ယာဉ်မှာ ကားသစ်တစ်စီးဖြစ်ပြီး ခရီးသည်တစ်ဦးမှ မပါရှိကြောင်း၊ အဆိုပါကားနှင့် အတူ စုစုပေါင်းကားသစ်သုံးစီး သွားနေစဉ်အတွင်း နောက်ဆုံးမှ မောင်းနှင်လာသည့် ယာဉ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ မီးလောင်ရခြင်းမှာ ယာဉ်မောင်းနေစဉ် ဘက်ထရီအိုးမှတစ်ဆင့် ဝါယာရှော့ဖြစ်ကာ လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး မီးလောင်ချိန်မှာ ညနေ ၄ နာရီ ၈ မိနစ်မှ ၄ နာရီ ၃၅ မိနစ်ထိ ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။"ကျွန်မက တာမွေကနေ သံလျင်ကိုသွားတဲ့ ဟိုင်းလတ်ကားကို စီးပြီးသွားတယ်။ ၆ နာရီလောက်မှာ ကားမီးလောင်နေလို့ ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့် မပြူသေးဘူးပြောတယ်။ ည ၇ နာရီမှာ တံတားပေါ်ကို တက်မောင်းခွင့် မပေးသေးတော့ ကျွန်မစီးတဲ့ကားက ယုဇနဥယျာဉ်ဘက်ကနေ ပတ်ပြီးမောင်းခဲ့ပါတယ်" ဟု သံလျင်သို့ ခရီးသွားတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ မီးသတ်ယဉ် ၃ စီးလာရောက်ငြှိမ်းသတ်သွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ သဲလျင်မြို့နယ် ရဲစခန်းမှ (ပ) ၇၈၈/၂၀၁၀ ပြစ်မှုပူဒ်မ ၂၈၅ ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ထားကြောင်းသိရှိရသည်ဟု news-eleven ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်.။
View People's Perspectives - Myanmar 2010 Elections Report
ရှေ့နေများကောင်စီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ထူး နှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ( ၂၀၁၀ ) ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေရေးရာဆွေးနွေးပွဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး နအဖစစ်သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြသပွဲ အခမ်းအနား ( ကိုရီးယား )
ပေးပို့ ပေးသော မောင်လေး ဘော်ဘော် ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
ယနေ့ (၁၆.၆.၂၀၁၀)စင်ကာပူနိုင်ငံ Orchard လမ်းမှာ မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်မြို့လည်ခေါင်ရေကြီးနေသောဓာတ်ပုံသတင်း
ဓာတ်ပုံများ ပို့ပေးသော သူငယ်ချင်း စင်ကာပူမှ ကိုရဲမြင့် အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, June 16, 2010 Links to this post
ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲစဉ်များကို ရန်ကုန်လမ်းဆုံတချို့တွင်ဤသို့ ကြည့်နိုင်ပြီ...
ရန်ကုန်မြို့တနေရာတွင် မြင်ကွင်းကျယ်ရုပ်သံမှတဆင့် ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲ ကြည့်နေသူများ (ဓာတ်ပုံ - AP)
ရခိုင်ပြည်နယ် မိုးကြီး မြေပြိုမှုအတွင်း သေဆုံးမှုများရှိ(ရုပ်သံမြင်ကွင်း)
လူနေရပ်ကွက် အတော်များများမှာ ဆိုရင်လည်း မိုးရေလျှံမှုတွေ ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောပြကြပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့ ကူညီကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့အစည်း တချို့က အရေးပေါ် အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ်တွေ စတင် ဆောင်ရွက်နေတာတွေ ရှိပြီလို့လည်း ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း မိုးသည်းထန် ရေကြီးတဲ့အတွက် လမ်းတွေပျက်စီး ပြတ်တောက်နေပြီး ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေ လာဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
မြန်မာနဲ့ ကပ်နေတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာလည်း မိုးကြီး မြေပြိုလို့ ၄၇ ယောက် အနည်းဆုံး သေဆုံးတယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။တောင်ပိုင်း ကမ်းရိုးတန်း ဒေသဖြစ်တဲ့ ကော့က်စ် ဘဇား (Cox’s Bazar) မှာ ဒီနေ့ အင်္ဂါနေ့ မြေပြိုမှု ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ သေဆုံးသူတွေကို ဆက်ပြီး ရှာဖွေနေတာနဲ့အတူ သေဆုံးသူ အရေအတွက် များလာနိုင်ပါတယ်။
စစ်သားတွေ စခန်းချနေတဲ့ နေရာမှာ မြေပြိုသွားလို့ စစ်သား ၆ ယောက် သေဆုံးပြီး ၄ ယောက် ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာလည်း မြေပြိုတဲ့ နေရာတွေဆီ အကူအညီတွေ ရောက်ဖို့ အခက်အခဲတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်နေတယ်လို့ မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက်တွေက ပြောပါတယ်။
နျူကလီးယားကိစ္စပတ်သက်ပြီး နအဖ စွပ်စွဲချက်အပေါ် ဗိုလ်မှူး စိုင်းသိန်းဝင်းနှင့် ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွဋ်တို့က ပြန်လည်ငြင်းဆို
နျူကလီးယားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သောကြာနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရသတင်း ထုတ်ပြန်ချက်ပါ အချက်တချို့ မှားယွင်းနေတယ်လို့ ဗိုလ်မှူး စိုင်း သိန်းဝင်းနဲ့ ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်တို့က ဒီဗွီဘီ ဆီ စာနဲ့အထောက်အထားဓာတ်ပုံတွေ ပေးပို့ပြီး ငြင်း ဆိုလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီစာတွေအတွင်း အထောက်အထားက ထောက်ပြထားတဲ့အချက် ၂ ခုကတော့ ဗိုလ် မှူး စိုင်းသိန်းဝင်းဟာ ‘နအဖ’ ကပြောနေသလို ဗိုလ်ကြီးအဆင့်မဟုတ်ဘဲ ဗိုလ်မှူး ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အထောက်အထား ရုံးစာနဲ့အထောက်အထားဓာတ်ပုံ၊ နောက်တခါ ဗိုလ်မှူးအောင် လင်းထွဋ်ရဲ့ စာထဲမှာတော့ ‘နအဖ’ က စွပ်စွဲထားတဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၅ဝဝ ကျော်အလွဲ သုံးစားလုပ်တယ်ဆိုတာ မဟုတ်ကြောင်း၊ ဒေါ်လာ ၈ဝဝဝ ကျော်ကို သံ မှူးကြီး ဦးမင်းလွင်ဆီ လွဲပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်း သံရုံးရဲ့ တရားဝင်စာကို ပူးတွဲဖော်ပြ ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာမြိုင်မြို့မှာ အခြေစိုက်ဖွင့်ထားတဲ့ နျူကလီးယားတပ်ရင်းမှ ဗိုလ်မှူး စိုင်းသိန်းဝင်း ပြည်ပကိုထွက်လာပြီး ‘နအဖ’ နဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားတို့ရဲ့ နျူကလီး ယား ဆက်ဆံရေးအကြောင်း ဒီဗွီဘီကို ပြောပြပြီးတဲ့နောက် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သောကြာနေ့မှာ စစ်အစိုးရက သတင်းထုတ် ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ဟာ ဗိုလ်မှူး စိုင်းသိန်းဝင်းနဲ့ ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွဋ်တို့ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်တာမှအပ နျူကလီးယားနဲ့ ပတ်သက် ပြီး အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကို ငြင်းဆိုနိုင်တာမျိုး မတွေ့ရသေးပါဘူး။
ရန်ကုန်မြို့ တွင် ပါရမီဂိတ်ရထားသံလမ်းအကူးရထားလမ်းဖြတ်ကူးသည့်ကားကို မြို့ပတ်ရထားက အရှိန်ပြင်းစွာ ၀င်တိုက်
ရထားလမ်းဖြတ်ကူး နေသော မော်တော်ယာဉ်အား မြို့ပတ် ရထားက အရှိန်ပြင်းစွာ တိုက်မိသော ကြောင့် မော်တော်ယာဉ်ပျက်စီးပြီး ယာဉ် ပေါ်ပါလူလေးဦးအနက် နှစ်ဦးပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဇွန် ၄ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်ဘူတာကြီးမှ အင်းစိန် သို့ မောင်းနှင်လာသော မြို့ပတ်ရထားတစ် စင်းသည် ယင်းနေ့ ည ၁၀နာရီ ၄၅ မိနစ် တွင် အုတ်ကျင်းဘူတာနှင့် သမိုင်းဘူတာ အကြား မိုင်တိုင်အမှတ်-၆^၂၅နှင့် ၆^၂၆ တို့အကြား ပါရမီဂိတ်ရထား သံလမ်းကူး အရောက်တွင် သံလမ်းအား ဖြတ်ကူးလာ သော လိုက်ထရပ်စ်အဖြူရောင်ယာဉ်အား တိုက်မိခဲ့သည်။ ယင်းသို့ တိုက်မိသော ကြောင့် ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်ပေါ်ပါသူ အသက် (၂၀)အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦး မှာ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့သော်လည်း ကျန်နှစ်ဦးမှာ ထိခိုက်မှုမရှိကြောင်း သိရ သည်။
''ကားအမှားလား၊ ရထားအမှား လားဆိုတာ ရုံးမှာ စစ်ဆေးရင် အဖြေပေါ် မှာပါ။ လက်ရှိတော့ ရထားကို မီးရထား အက်ဥပေဒအရ အရေးယူစစ်ဆေးဆောင် ရွက်နေပါတယ်''ဟု အုတ်ကျင်းဘူတာမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
''လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လကလဲ အဲဒီနေ ရာမှာ လူတစ်ဦး ရထားအကြိတ်ခံရသေး တယ်။ အဲဒီနေရာက ခဏခဏ ရထား အကြိတ်ခံရတဲ့ ရာဇ၀င်ရှိတယ်။ ရထားလာ တဲ့အချက်ပေးကိရိယာကလဲ ချို့ယွင်းနေ တယ်။ အဲဒီနေ့က ရထားက အရှိန်နဲ့ ၀င် တိုက်တော့ ကားကို အလယ်ကနေ ချိုး လိုက်သလို ကျိုးကျေပြီး လွင့်ထွက်သွား တယ်။ ကားပေါ်မှာပါတဲ့သူတွေကို သေပြီ မှတ်တာ။ နှစ်ယောက်ပဲ ဒဏ်ရာအပြင်း အထန်ရတယ်။ ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်က တော့ ဘာမှ မဖြစ်သွားဘူး။ ဒဏ်ရာရတဲ့ နှစ်ယောက်ကို သွားကြည့်တော့မှ မသေ သေးတာနဲ့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို အရေး ပေါ်ပို့လိုက်ရတယ်''ဟု အခင်းဖြစ်ပွားရာကို တွေ့ရှိခဲ့သည့် မျက်မြင်သက်သေတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယာဉ်မောင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာများ ပြင်းထန်စွာရရှိသော ကြောင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအရေးပေါ်ဌာန တွင် ကုသခဲ့ရပြီး အသက် (၂၀)အရွယ် မိန်းကလေးမှာ ဦးခေါင်းပိုင်းအဓိကထိခိုက် သောကြောင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးဦးနှောက် နှင့် အာရုံကြောဌာနတွင် လေးရက်ကြာမျှ ကုသခံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအမှုကို လှိုင်မြို့နယ် ပိတောက်ချောင်းရဲစခန်းမှ (ပ)၁၂၉^၁၀ မီးရထားအက်ဥပဒေတို့ဖြင့် ဆက်လက် စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအရုံး (Generation Wave) ၏ မျိုးဆက်လှိုင်း ကဗျာစုများ။
GW PDF new
ပေးပို့ ပေးသော ပြည့်စုံ(GW) အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
ရန်ကုန် Myanmar Information and Communication Technology Park မြန်မာအင်ဖိုတက် လို့ခေါ်တဲ့ MICT Park မှာ မနက်က မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားကြောင်း
ရန်ကုန် Myanmar Information and Communication Technology Park မြန်မာအင်ဖိုတက် လို့ခေါ်တဲ့ MICT Park မှာ မနက်က မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ၀န်ကြီးများအား အထူး တာဝန် ပေးအပ်ခြင်း
အရည်အချင်းများရှိသောဝန်ကြီးများမျာအားအထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုနိုင်ငံတော် အကြီးအကဲများက ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူလျှက်ရှိကြသည်။
ကမ္ဘာတွင် လဘ်စားမှုအများဆုံး တိုင်းသူပြည်သားများအား အနှိပ်စက်ဆုံး ပညာရေး တွင် အဆင့်အနိမ့်ဆုံး
တက္ကသိုလ် ၊ကောလိပ် အားလုံးကို မြို့နှင့် အဝေးဆုံး နေရာတွေ ထားရှိခြင်း မတရား ဖိနှိပ်မူ အခံရဆုံး သမိုင်း
တွင်မကြုံဖူးအောင် နိုင်ငံအ၀န်းလုံး ရာသီဥတု ဒဏ်ကို ပြင်းထန်စွာ ခံနေရခြင်း မိမိ ကိုးကွယ်သော ဘာသာ
အား နှိပ်ကွပ်မှုအများဆုံး ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွင် အနှေးဆုံး နှင့် အခက်ခဲဆုံး ဥပဒေသစ် အများဆုံးရေးဆွဲ့
သည် နိုင်ငံ စာပေ လွတ်လပ်ခွင့် အနည်းဆုံး ကမ္ဘပေါ်တွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်မှု အခက်ခဲဆုံးနှင့် စက်သုံး
မြန်မာနိုင်ငံ ၀န်ကြီးများအား အထူးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း
မြန်မာပြည်အား မည်သူမျှ ကျူးကျော်မစော်ကားနိူင်ဘဲ မိမိတို့သာ စိတ်တိုင်းကျ ဒုက္ခပေး၇န် တပ်မတော်အား
အဆင့်မြင့်သထက်မြင့်စွာ တည်ဆောက်ရန်။ မြန်မာနိူ်င်ငံ၏ နိူင်ငံခြား ၀င်ငွေများသည် အလွန် များပြားသော ကြောင့်တပ်မတော် မှ တာဝန်ယူကာ မလိုအပ်သော နေရာများ တွင် စစ်လက်နက်များ တပ်ဆင်အသုံးပြုရန်
တပ်မတော်သား များသည် ပြည်သူများ ဆင်းရဲဒုက္ခ မရောက်စေရန် အဆင့်မြင့် နည်းပညာများ ကို သင်ကြား ရာတွင် အရပ်သားများအား ခွင့်မပြုရန်။
ပြည်သူများ ဆင်းရဲပင်ပန်းကာ ဦးနှောက်မခြောက်စေရန် နေရာတိုင်းတွင် စစ်သားများသာ ရာထူးရယူခြင်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် အတိတ်တွင် ကျန်ရှိသောကြောင့် ပစ္စုပ္ပန်ကိုသာ ဦးတည်ထား လိုသောကြောင့်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်း ကို သတင်းအမှောင်ချခြင်းဖြင့် တိုင်းပြည်အား ကူညီပေးရန် ။
၀န်ကြီးများ သည်မဟုတ်သော အလုပ်များဖြင့် လွန်စွာ အလုပ်ရူပ်သောကြောင့် အမိန့်ကြော်ငြာချက်မှန်သမျှ
တပ်မတော်မှသာ ဦးစီးထုတ်ပြန်ခြင်းဖြင့် ၀န်ကြီးများအား ကူညီပေးကြရန်။
မြန်မာနိူင်ငံကျောင်းသားလူငယ်များ ပညာရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေရန် နှင့်ဘွဲ့ရများ ပိုမိုမွေးထုတ်နိူင်ရန် ရည်ရွယ် ချက်ဖြင်သင်ရိုးညွန်းတမ်းများတွင် ခက်ခဲသော စဉ်းစားညဏ်သုံးရသောသင်ရိုးများ ကို ထုတ်နူတ်၍ လွယ်ကူ သောစာများကို သာ ထည့်သွင်းရန် နှင့် စာမေးပွဲတွင်မေးမည့်အရာများကို သာ ထုတ်နူတ်သင်ကြားရန်။
သမိုင်းဆိုသည် မှာ အတိတ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြောင်းများဖြစ်သောကြောင့် သမိုင်းများအား မသင်ကြား ပေးရန်။
ကျောင်းသားများ စိတ်အေးချမ်းသာစွာ ပညာသင်ကြားနိူင်ရန် တက္ကသိုလ်ကျောင်းများအား ယခုထက်ပိုဝေး
သော နေရာများတွင် ရွှေ့ပြောင်းဆောက်လုပ်ရန်။
ကျောင်းသားများ၏ ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်း ရစေ၇န်အတွက် လမ်းများများလျှေက်ရသော နေရာများတွင်
သာ ဘစ်စကားမှတ်တိုင်များကို ထားရှိရန်။
ဆရာဆရာမများအား ကျောင်းသားများ ပညာရေးကို ပိုမိုသင်ပေးနိူင်ရန် ကျူရှင်ပိုမိုဖွင့်လှစ်ကြပါရန်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် သဘာဝကို ချစ်မြတ်နိူးသောနိူင်ငံဖြစ်သောကြောင့် ညအခါတွင် ပြည်သူများ အလုပ်မလုပ်ကြဘဲကောင်းမွန်စွာ အနားယူနိူင်ရန် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကိုဖြတ်တောက်ရန် နှင့်လိုအပ်ပါ က နေ့အခါတွင်ပါ
ဖယောင်းတိုင်ထုတ်စက်ရုံများ နှင့် ယပ်တောင်စက်ရုံများအာ အမြန်တည်ဆောက်နိူင်ရန် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများ နှင့် နျူးကလီးစက်ရုံများကို ပိုမိုတည်ဆောက်ပြီး ပိုလျှံသော တိုင်းပြည်
ကျွမ်ကျင်သော လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများ အား အသုံးချလျှင်လိုအပ်သောလျှပ်စစ်ဓါတ်အားအပြင်မလိုအပ်သော ပိုလျှံလျှပ်စစ်ဓါတ်အားများထွက်၇ှိလာမည်ဆိုးသောကြောင့် မကျွမ်းကျင်သည့် ပညာရှင်များကိုသာတာဝန်ပေး
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိသောလမ်းများ အားခတ်မှီသော နည်းစနစ်များ နှင့်တည်ဆောက်မည်ဖြစ်သောကြောင့် လမ်းများကို မကြာခဏ ပြင်ဆင်ရသောနည်းစနစ်များသာ အသုံးချရန်။
မကြာခဏ လမ်းများပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် လမ်းဖြတ်သန်းခများကို ပိုမိုကောင်ခံရန်။
ယခုအသုံးပြုထားသော လမ်းတံတားနည်းပညာများ၏ အကျိုးဆက်ကို သိသောအားဖြင့် တာယာစက်ရုံများ တည်ဆောက်နေသော စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအား ကူညီပေးရန်။
နှင့်တံတားကြေး၊မြို့ဝင်ကြေးသာမက ရွာဝင်ကြေးပါကောက်ခံပေးခြင်းဖြင့်ပြည်သူများ ခရီးသွားခြင်းကို တိုးမြင့်ရန်
ပြည်သူများယဉ်အန္တရယ်ကင်းရှင်းစေရေးအတွက် ကားများ မြန်မြန်မောင်း၍ မရနိူင်သောလမ်များကို သာ တည် ဆောက်ရန်။
ယဉ်ထိန်းရဲများ အလုပ်ကြိုးစားနေသည်ကို သိသာစေရန် အတွက် လာသမျှကားများအား ဦးထုပ်ချွတ်ကားသမား များအားနူတ်ဆက်စေရန်နှင့်ကားသမားများမှ ပြန်၍နူတ်ဆက်ရန်။
ယဉ်ထိန်းရဲ များ အလုပ်မရှိမည် ဆိုးသောကြောင့် မီးပွိုင့်များတွင် အဆင့်မြင့် နည်းစနစ်များ အသုံးမပြုကြရန်။
ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုကို တန်ဖိုးထားသောအားဖြင့် ယဉ်သစ်တင်သွင်းခွင့်ကို ခွင့်မပြုဘဲ ယဉ်ဟောင်းများသာ
ပြည်သူများ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆက်သွယ်နိူင်ရေးအတွက် တယ်လီဖုန်းလိုင်းများ ချပေးရန် ၊ သို့သော်ပြည်သူများ ငွေကုန်ကြေးကြများမှုကိုထိန်းသိမ်းနိူင်ရန်အတွက် ဖုန်းလိုင်းများ အား ခေါ်ရခက်အောင်လုပ်ထားကြရန် ။
ကမ္ဘာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဖုန်းလိုင်း နှင့်ဖုန်းခ အဈေးကြီးဆုံး နိုင်ငံအဖြစ် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနိူင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ၏
မည့် တရားတော်မျာသာသင်ကြားပေးနိူင်ရန် သာသနာရေးဝန်ကြီးအား အထူးတာဝန်ပေးအပ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ သံဃာနာယကများ အနေဖြင့် အစိုးရ၏လျှောက် ထားချက်မှန်သမျှများကို သဘောတူပေးရန် နှင့် တရားပွဲများအား အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ခွင့်ပြုရန်။
အချို့သော ဘုရားရှင်၏ စစ်မှန်သော တရားတော်များ ကို အစိုးရအခမ်းအနားများတွင် မဟောပြောရန် နှင့် အစိုးရ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဝေဖန်မည့်သံဃာတော်များအား သံဃာ့နာယက အဖွဲ့တွင် မခန့်အပ်ရန်။
ပြည်သူများ ဒုက္ခကိုို ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်ရှိသည့် ရဟန်းသံဃာများအား ဘုရားရှင် တရားတော်တွင် မပါသော် လည်း သံဃာမဟုတ်ဟု လိုအပ်ပါက အတိအလင်း ကြော်ငြာပေးရန်သံဃာနာယကအဖွဲ့၏တာဝန်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ၏ သမိုင်းတွင် မကြုံဖူးလောက်အောင် မည်သည့်နေရာ၌ တိုးတက်နေသည်ကို အမှန်တကယ်သိ
သော သူများ၏ ဟုတ်မှန်သော သတင်းများကို မမှန်ကန်သော သတင်းများအဖြစ် ချက်ခြင်း ကြော်ငြာချက်
သတင်းစာ ဂျာနယ်တိုင်းတွင် အတင်းအဖြင်းများကို သာ အရေးကြီးဖော်ပြရန် နှင့် တိုင်းပြည်၏လိုအပ်ချက်များကို မဖော်ပြကြရန်။
သတင်းမှန်ဖော်ပြသောဂျာနယ်များအား ဥပဒေအသစ် ထုတ်၍ ဂျာနယ်ထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်ရန် နှင့်စာရေးစရာအား အပြစ်အမျိုးမျိုးပြ၍ထောင်ချရန်။
တိုင်းသူပြည်သားများ ၏ ဆန္ဒကို ထုတ်ဖော်မရေးသားကြရန် ။
မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင် (၀ါ ) သတင်းအမှာင်ချရေး ကော်မတီ ကိုလည်း သေချာစွာပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရန် ။
စစ်မှန်စွာ သတင်းမှန်များကို ဖော်ပြသူများအား တရားဝင် ရှုံ့ချရန်။
ညစ်ညမ်းမှုသည် မကောင်းမှန်းသိသာစေရန် ညစ်ညမ်း ၀က်ဆိုက်များအား ကောင်းစွာကြည့်ရူနိူင်စီစဉ်ပေး၍
သတင်းမှန်ဖော်ပြသောဝက်ဆိုက်များအား ပြည်သူများအချိန်ကုန်မည်ဆိုး၍ ကောင်းစွာ မကြည့်နိူင်အောင် စီစဉ်ထားရှိရန်။
တိုင်းပြည်တွင် ဖြစ်ပွားနေသာ ခိုးဆိုးလုယက်မှုများ ကို မဖြစ်ပွားစေရန် လူဆိုးသူခိုးများအား ထောင်ထဲထည့်၍ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဦးစီးဆောင်ရွက်ရန်။
ခန်းများ နှင့်ကာရာအိုကေများ တိုးချဲ့ဖွဲ့လှစ်ရေးကို အကူအညီပေးကြရန်။
တရားစီရင်ရေး တွင် ဥပဒေအသစ်များထုတ်ဖော်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာအလယ်တွင် ဥပဒေအများဆုံး၇ှိသောနိုင်ငံအ
အပြစ်မရှိပြည်သူများအား ကောင်းမွန်စွာ ထောင်ချနိူင်ရန် ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာ တရားစီရင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ အား အလုပ်ဖြုတ်၍ မတရားသူကြီး အသင်းခန့်အပ်ရန်နှင့် ဘယ်တိုင်းပြည်တွင်မှမရှိသော ထောင်ဒဏ်မျိုးချမှတ်ရန်။
လောင်းကစားသည် တိုင်းသူပြည်သူများ၏ ထွက်ပေါက်ဖြစ်သောကြောင့် လောင်းကစားမှန်သမျှ အားပေးရန်နှင့် ဖြစ်နိူင်ပါကမိမိကို ဒိုင်လုပ်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူများအား ကူညီပေးရန်။
၀န်ကြီးများ၏ တာဝန်မှာ လွန်စွာများပြားခြင်းကြောင့် အပြည့်အစုံမဖော်ပြနိူင်သည်ကို ခွင်လွှတ်ကြပါ၇န် လေးစားစွာ တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
အထက်မှ တာဝန်ပေးအပ်သည့်အတိုင်း တိကျစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသောကြောင့် မြန်မာပြည် သည် ကမ္ဘာအလယ်တွင် နံမည် ကြီးနေပါကြောင်း လေးစားစွာ တင်ပြအပ်ပါသည်။
ထိုသို့အစစအရာရာတွင် ထူးခြားသောရလဒ်များ ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတကာ မှ မနာလိုဖြစ်ကာ ဟုတ်မှန်သော သတင်းများကိုဖော်ပြလျှက်ရှိပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, June 15, 2010 Links to this post
မြန်မာကြယ်ငါးပွင့် သင်္ဘောသားများ ထက်ဝက်ခန့် အလုပ်ထွက်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းမေးမြန်းချက်
ကျွန်ုပ်တို့၏မြေများကို သိမ်းပိုက်ထားခြင်းရခိုင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်နှင့်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအိုဝ်းနယ်တို့၌မြေယာသိမ်းမှုများ
Holding Our Ground Burmese
Holding Our Ground (English)
ရန်ကုန်မြို့တွင်အိမ်ငှားအယောင်ဆောင်လင်မယား အိမ်ပွဲစားထံမှ ကျပ်ခုနစ်သိန်းဖိုးခန့်ရွှေထည်များ အကြမ်းဖက်လုယက်
''အိမ်ခြံမြေပွဲစားလုပ်တာ နှစ် ၃၀ လောက်ရှိပြီ။ တစ်ခါမှ ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဖူးဘူး။ အရမ်းလဲ ထိတ်လန့်သွားတယ်''ဟု အကြမ်း ဖက်ကာ လည်ပင်းကို ဓားမြှောင်ဖြင့်အထိုးခံ ရသော မြေနီကုန်းအနောက်ရပ်ကွက် အောင် တော်မူလမ်းနှင့် ဈေးလမ်းထောင့် အိမ်အမှတ် (၃၃)နေ အသက်(၅၂)နှစ်အရွယ် အိမ်ပွဲစား ဒေါ်ချိုချိုက ၎င်း၏အဖြစ်အပျက်ကိုပြော သည်။
မြေနီကုန်းအနောက်ရပ်ကွက် ရန်ကင်းလမ်းတွင် ဇွန် ၃ရက်က အိမ်ငှားမည် ဟုပြောပြီး အိမ်လိုက်ပြခိုင်းရာမှ ပွဲစားကို နေအိမ်ခန်းတွင် အကြမ်းဖက်ကာ ဓားမြှောင် ဖြင့် လည်ပင်းကိုနှစ်ချက်ထိုးပြီး ကျပ်ခုနစ်သိန်း ခန့်တန်ဖိုးရှိ ရွှေထည်ပစ္စည်းများယူဆောင် သွားသည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ယင်းဖြစ်ရပ်ကို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသည့် ဒေါ်ချိုချိုသည် ဒဏ်ရာကြောင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အထွေထွေကုသဆောင် တွင် ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရသည်။
''အဲဒီနေ့ နံနက် ၁၁နာရီလောက်က အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦး အိမ် ငှားချင်တယ်ဆိုပြီး အန်တီတို့နေတဲ့အိမ်ကို ရောက်လာတယ်။ မျက်နှာသိကလဲဖြစ်ပြန်၊ အိမ်လဲအဆင်သင့်ရှိနေတာနဲ့ အိမ်ပြဖို့လိုက် သွားတယ်။ မြေနီကုန်း ပထမတစ်အိမ်ကို အရင်ပြတော့ မကြိုက်ဘူးလို့ ပြောတာနဲ့ ရန်ကင်းလမ်းကအိမ်ကို လိုက်ပြတာ၊ ဒါနဲ့ အဲဒီအိမ်ကိုလဲရောက်ရော အခန်းကြိုက် တယ်လို့ပြောပြီး နောက်ဖေးဘက်ခဏသွား ကြည့်ကြမယ်လို့ပြောတာနဲ့ လိုက်သွားတာ၊ နောက်ဖေးခန်းလဲရောက်ရော မိန်းမလုပ်တဲ့ သူက ပါးစပ်ကိုပိတ်ပေးတယ်။ ယောက်ျားလုပ် တဲ့သူက ယာဘက်လည်ပင်းကို ဓားမြှောင်နဲ့ တစ်ချက်ထိုးတယ်။ မိန်းမကလဲ တစ်ချက်ထပ် ထိုးတယ်။ ပြီးတော့ အန်တီ့ရဲ့မျက်နှာတစ်ခု လုံးကို လက်သီးနဲ့ထိုးတယ်။ လည်ကုပ်ကို ခြေထောက်နဲ့နင်းတယ်။ အန်တီ ဒူးထောက် ပြီး တောင်းပန်တာတောင် ရက်ရက်စက်စက် လုပ်သွားကြတယ်။ သူတို့အားရအောင် နှိပ် စက်ပြီး အန်တီလဲကျတော့မှ ၀တ်ထားတဲ့ ဆွဲကြိုး၊ နားကပ်၊ လက်စွပ်တွေယူသွားတာ'' ဟု ဒေါ်ချိုချိုက သူ၏အဖြစ်ကိုပြောသည်။
ထို့နောက် မွန်းလွဲ ၁၂နာရီ ကျော် အချိန်တွင် ဒေါ်ချိုချို ဒဏ်ရာကြောင့် မေ့ မြောနေရာမှ ပြန်လည်သတိရလာပြီး ပတ် ၀န်းကျင်ကို အကူအညီတောင်းရာမှ လာ ရောက်ကူညီပြီး ဒေါ်ချိုချိုနေသည့်အိမ်သို့ အကြောင်းကြားပေးကြကြောင်း သိရသည်။
''အမေ့ကို အသေသတ်သွားကြတာ။ ကံကောင်းတော့ အမေကမသေဘူး။ သက် ကြီးရွယ်အိုတစ်ယောက်ကို ဒီလိုလုပ်သွား တာ အရမ်းရက်စက်လွန်းအားကြီးတယ်။ ဒီလိုလုပ်သွားတဲ့ လူနှစ်ယောက်က အရင် ဒီရပ်ကွက်မှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်သွားတဲ့ သူတွေ။ အဲဒီဆိုင်ဖွင့်ဖို့နေရာကိုလဲ အမေပဲ ရှာပေးလိုက်တာ။ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ဥပဒေ အရ ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူနိုင်မယ် လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အမှုဖြစ်စဉ်ကို စမ်း ချောင်းရဲစခန်း၊ ခရိုင်၊ တိုင်းအဆင့်အထိ တိုင် ကြားထားတယ်''ဟု ဒေါ်ချိုချို၏သားဖြစ်သူ ကိုခင်မောင်ဦးကပြောသည်။
အဆိုပါအမှုကို စမ်းချောင်းရဲစခန်း မှ (ပ)၂၉၅/၁၀ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၃၉၄အရ အရေးယူဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
စီဒီအမ်အေ၈၀၀မဂ္ဂါဟတ်ဇ်ဖုန်းများကိုဇွန်လ၁၅ရက်မှစတင်ကာ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကသတ်မှတ်ပေးသည့်ရန်ကုန်မြို့ရှိ နေရာရှစ်ခုတွင်၂၄နာရီအတွင်းလျှောက်ထားနိင်
ကျပ်ငါးသိန်းဖုန်းဟု လူသိများသည့် စီဒီအမ်အေ ၈၀၀မဂ္ဂါဟတ်ဇ် ဖုန်းများကို ဇွန်လ၁၅ရက်မှစတင်ကာ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက သတ်မှတ်ပေးသည့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ နေရာရှစ်ခုတွင် ၂၄နာရီအတွင်း အပြီးသတ် လျှောက်ထားရယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာရှစ်ခုမှာ အိတ်စ်ချိန်းရုံးလေးခုနှင့် စာတိုက်လေးခုဖြစ်ပြီး အိတ်စ်ချိန်းရုံးလေးခုမှာ အလုံ၊ ရွှေဂုံတိုင်၊ ပန်းဆိုးတန်းနှင့် လမ်း၄၀အိတ်စ်ချိန်းရုံးများဖြစ်ကာ စာတိုက်လေးခုမှာ မင်္ဂလာဒုံ၊ မြောက်ဒဂုံ၊ ဗဟိုစာတိုက်ကြီးနှင့် တက္ကသိုလ်စာတိုက်တို့ ဖြစ်သည်။ ဖုန်းလျှောက်ထားရယူလိုသူများ အနေဖြင့် ထိုသတ်မှတ်နေရာရှစ်ခုတွင် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်စုံပါက ကျပ်ငါးသိန်းဖုန်း ငှားရမ်းသုံးစွဲခွင့်ကို ၂၄နာရီအတွင်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ငှားရမ်းသုံးစွဲခွင့်ကို ရရှိပြီးပါက မင်္ဂလာဒုံ၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ မြောက်ဥက္ကလာပ၊ ကျောက်တံတား၊ ဗဟန်းမြို့နယ်များရှိ အီလိုက်တက် အရောင်းစင်တာများတွင် ဖုန်း RUIM ကတ်များကို ထုတ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ထိုဖုန်းများကို ယခင်က နေပြည်တော်ရှိ ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဝန်ကြီးရုံး၊ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး အင်ဂျင်နီယာချုပ်ရုံးနှင့် တိုင်းအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီရုံးများသို့ ဆက်သွယ်လျှောက်ထားခဲ့ရပြီး ဖုန်းငှားရမ်းသုံးစွဲခွင့်ရရှိရန် အနည်းဆုံး နှစ်ပတ်ကြာမြင့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဖုန်းများ စတင်ချပေးထားမည့် အစီအစဉ်ကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလတွင် ကြေညာခဲ့ပြီး ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် လိုင်းပေါင်းတစ်သိန်းခွဲ ချထားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သတ်မှတ်ဧရိယာကုဒ်နောက်တွင် ၇၃(သို့)၉၁ နံပါတ်များဖြင့် စတင်သည့် ထိုဖုန်းများကို ဇန်န၀ါရီလ၄ရက်မှ စတင်ကာ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် ချထားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုလဆန်းတွင်ထုတ်ပြန်သည့် တရားဝင်စာရင်းများအရ ရန်ကုန်မြို့တွင်လိုင်းပေါင်း ၃၅,၀၀၀ ကျော်နှင့် မန္တလေးမြို့တွင် လိုင်းပေါင်း၁၅,၀၀၀ကျော် ချထားပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါဖုန်းများကို ၂၄နာရီအတွင်း အပြီးလျှောက်ထားရယူနိုင်မည့် အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်နေ ကိုမိုးညိုက “ဒီအစီအစဉ်သစ်ကတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဖုန်းလျှောက်ချင်သူတွေအတွက် အချိန်သိပ်မပေးရတော့သလို လျှောက်ထားရမယ့် နေရာတွေကို အသေအချာ သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အတွက် ဘယ်နေရာမှာ လျှောက်ရမယ်ဆိုတာ သို့လော၊ သို့လောဖြစ်နေတဲ့ ဖုန်းလျှောက်ထားသူတွေအတွက် အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီသတင်းကတော့ လူတိုင်းမျှော်လင့်နေတဲ့ သတင်းပါ။ အခုဆိုရင် တချို့နေရာတွေမှာ ဖုန်းလိုချင်သူတွေအတွက် တစ်သိန်းလောက် အပိုပေးနေရပေမယ့် အဲဒီအခြေအနေရောက်ရင် ဒါလွတ်ကင်းသွားမှာပေါ့”ဟု သုံးသပ်ပြောကြားသောသတင်းအား ပလဲနက်(.planet) ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြပါရှိပါသည်.။
ရန်ကုန်တိုင်း အပါအ၀င် နယ်မြို့ များ ရှိ အခြေခံပညာအဆင့် ကျောင်းသားများ သည် ပညာသင်၂၀၁၀-၁၁ ပညာသင်နှစ်တွင် ချမှတ်လိုက်သော မူများအရ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် ပညာသင်ကြားမှု စရိတ်မတတ် နိုင်သောကြောင့် ကျောင်းပညာသင်ကြားရေးမှ စောစီးစွာ ထွက်ခွာရသူများ ရှိသည် ဟု စုံစမ်း သိရှိရသည်။
ယမန်နေ့ က အခြေခံပညာ အထက်တန်း ဆယ်တန်း အောင်စာရင်း ထွက်ချိန်တွင် ကျရှုံးခဲ့သူများက ‘ကျွန်တော်တော့ နောက် နှစ် ပြန်တက် ဖို့ အစီအစဉ် မရှိ တော့ ဘူး ၊ကျူရှင် လည်း မယူနိုင်ဘူး၊မီးစက် ဖိုးလည်း မတတ် နိုင်ဘူး ဟု အထက (၁) မြောက်ဥက္ကလာ မှ ကျောင်းသား တစ်ဦးကဆိုခဲ့သည်။
ဇွန်လဆန်း က စတင်ဖွင့် လှစ်သည် ပညာသင်နှစ် ၏ အစဖြစ်သည့် တစ်လ မပြည့်ခင်မှာ ပင်အထက်တန်း ကျောင်းသား တစ်ဦး ၏ ကျောင်းစရိတ် သည် ငါးသောင်း ကျော်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကျောင်းသား မိဘ တစ်ဦး ကပြောသည်။’နောက်နှစ် ပရိုက်ဗိတ် ကျောင်း တွေ စမယ်ဆိုရင် ကျင့်သား ရအောင် လို့ ပေါ်လစီ တွေ ချိန်း တာ ‘ဟု အထက (၃)တာမွေ မှ ကျောင်းသားမိဘ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
အထက (၂) ရန်ကင်း မှ ဆယ်တန်းကျောင်းသား တစ်ဦးက ဆရာမ ကသူ့ ဆီမှာ ကျူရှင်မယူရင် မကြိုက် ဘူး ၊မတတ်နိုင် လို့ သင်ရိုး ညွှန်း တမ်း အဟောင်း ၀ယ်တာ သူ့ ဆီမှာကျူရှင် မယူ လို့ အဟောင်း မကိုင်ရဘူး လို့ ပြောတယ် ဟု အဆိုပါ ကျောင်းသား ကကျောင်းတွင်း အခြေအနေ များ ကိုပြောပြသည်။
ရန်ကုန် နှင့် ပဲခူးတိုင်း ရှိ အခြေခံ ကျောင်း အများစု မှာ အလှုငွေများ ထည့်ဝင်ခိုင်းခြင်းကျောင်းသာယာလှပရေး၊အားကစားကွင်း အဆင့်မြှင့်ရေး၊ ရေသန့် စက်တပ်ရေး၊အ၀ီစိတွင်း တူးရေး ခေါင်းစဉ် မျိုးစုံဖြင့် အလှုငွေ ခံကြသည် ။
ကျောင်းဆရာ၊ဆရာမ များက ယခုကဲ့ သို့ ကျူရှင် ယူခိုင်းခြင်း၊အလှုငွေများ ထည့်ဝင်ခိုင်းခြင်း တို့ သည် ပုဂ္ဂ လိက ပညာသင် ကြားရေးစနစ် သို့ ပြောင်းမည် ဟု သတင်းထွက်ပေါ်နေ သည့် ကျောင်းများ တွင် ပို၍ ဆိုးသည် ဟု သိရသည်။
ကျောင်းသားများ၏ ပညာ သင်ကြားစရိတ်မြင့်မား မှု ကြောင့် အထက်တန်း အဆင့်ကျောင်းသား များက ကျောင်း အချို့ တွင် အလှုငွေ မပေးရေး-ကျူရှင် မတက်ရေးဆော်သြမှု များ လုပ်နေသည် ။ယခင် သီတင်တစ်ပတ် က အခြေခံပညာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ နှင့် ရန်ကုန်ခရိုင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ တို့ က ဦးဆောင်ကာ အပို ပညာသင် ကြေး လျှော့ ချရေး စာများ ဝေငှခဲ့သည်။
အမေရိကန် တွင် K-12 ဟု ခေါ်သည့် အခြေခံပညာ (High School)ပညာ သင်စရိတ်မှာအခမဲ ဖြစ်သည့် ပြင် နံနက်စာ နှင့် နေ့ လည်စား စရိတ် နှင့် ကျောင်းကြိုပို့ စရိတ် ပါအခမဲ့ဖြစ်သည်။ အသက် ၁၈ နှစ် အောင် မည်သူ မဆို ပညာရေး အခမဲ့ သင်ယူ ခွင့်ရှိ ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ ရွှေ့ပြောင်း လာကြသည့် ဒုက္ခသည် များ ၏ သားသမီးများ ပါ လွတ် လပ်စွာ ပညာသင်ယူ နိုင်သည်။
အခြား နိုင်ငံများတွင် လည်း အထက်တန်းထိပညာ ရေးမှ အခမဲ့ ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နှင့် ဥရောပ နိုင်ငံ အချို့ တွင် ဆင်းရဲ သော ကျောင်းသား ၏ မိဘ (သို့ မဟုတ်) အုပ်ထိန်းသူ ကို အစားအသောက် အ၀တ်အထည်ထောက်ပံ့ခြင်း ၊အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေပေးခြင်း၊အိမ်တိုင်ယာရောက် လိုအပ် သည်များ ကိုကူညီခြင်း တို့ အား လုပ်ပေးသည် ။
သတင်းရင်းမြစ်..Freedom News Group
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး နဲ့ ပတ်သက်ဖို့ မြန်မာလူထုအကြား စိုးရိမ်မှုရှိဆဲ
စစ်အစိုးရ ထုတ်ပြန်သည့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပါ သတင်းစာ ဖတ်ရှုနေသည့် ရန်ကုန်မြို့ခံအချို့။
အထူးသဖြင့်ကတော့ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပြီး နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ တရားဝင် လုပ်ဆောင်ခွင့် ရလာကြပေမဲ့ အာဏာပိုင်တွေက စောင့်ကြည့်မှုတွေ ရှိနေဆဲ ဖြစ်တာမို့ အနှောင့်အယှက် ပေးတာတွေ ခံရလေမလား အရပ်သားတွေက စိုးရိမ်နေကြတာလို့ ဆိုပါတယ်။
စစ်အစိုးရက ဒီနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတွေ ထုတ်ပြန်လာပြီးတဲ့ နောက်မှာမှ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အဖြစ် ထူထောင်လာကြသူတွေဟာ ငွေကြေး မပြည့်စုံမှုတွေဟာလည်း စည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းတွေအတွက် အဟန့်အတားတွေ ဖြစ်နေရကြောင်း ပြောပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေမှာတော့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေ အတိုင်းအတာနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် ပါတီတွေ အနေနဲ့ အနည်းဆုံး ပါတီဝင် ၁,၀၀၀ ရှိရမှာ ဖြစ်သလို တိုင်း ဒါမှမဟုတ် ပြည်နယ်တခုမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ပါတီအနေနဲ့ အဖွဲ့ဝင် အနည်းဆုံး ၅၀၀ ရှိရမယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ အရင်တပတ်ထဲအထိ နိုင်ငံရေးပါတီဟောင်း ၅ ခုနဲ့ အသစ် ၃၇ ခုတို့ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ထူထောင်ခွင့် လျှောက်ထားရာမှာ ၄ ပါတီသာ ထူထောင်ခွင့် ချပေးဖို့ ကျန်တော့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘဘဦးတင်ဦး နဲ့ ဘဘဦးဝင်းတင်တို့ ရန်ကုန်မြို့ ရှိ HIV လူနာများကိုအားပေးစကားသွားပြောပြီး အမှတ်တရ အနေနဲ့ အပင်များစိုက်သွားခြင်းဓာတ်ပုံသတင်း
ပန်းချီဆရာ(၆ဝ)ကျော် ပါဝင်ပြသကြမယ့် သန်းမြင့်အောင် အမှတ်တရ ပန်းချီပြပွဲ
(၁၁၊၆၊၂ဝ၁ဝ)ရက် ဆိုရင် ပန်းချီ သန်းမြင့်အောင် ကွယ်လွန်ခဲ့တာ တစ်လတိတိရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းချီသန်းမြင့်အောင် တစ်လပြည့် အမှတ်တရ အနေနဲ့ သူ့ကိုချစ်တဲ့ ခင်တဲ့ မိတ်ဆွေ ပန်းချီဆရာများစုစည်းပြီး (၁ဝ၊၆၊၂ဝ၁ဝ) ရက်ကနေ (၁၅၊၆၊၂ဝ၁ဝ) ရက်အထိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဈေးမှာရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရိုးရာ ပန်းပညာရှင်များ အစည်းအရုံး (ဗဟို)၊ ပန်းချီ၊ပန်းပု အရောင်းပြခန်းမှာ ပန်းချီပြပွဲ တစ်ခု ခင်းကျင်းပြသကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပြပွဲမှာ ပါဝင်ပြသကြတဲ့ ပန်းချီဆရာ အများစုဟာ သန်းမြင့်အောင်ကို ချစ်တဲ့စိတ် တစ်ခုတည်းနဲ့ ပြပွဲကြေးပေးပြီး ပြသကြတာ ဖြစ်ပြီး ရောင်းရငွေထဲက အချိုးကျ စုပေါင်းပြီး ကျန်ရစ်နေခဲ့တဲ့ မိခင်၊ ဖခင်အိုနှစ်ပါးကို စုပေါင်း လှူဒါန်းကြမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နေရာဌာနအသီးသီးမှာ နာမည်ကိုယ်စီ ရှိကြပြီးဖြစ်တဲ့ ပန်းချီဆရာ (၆ဝ)ကျော်ရဲ့ ပန်းချီကား (၁ဝဝ)ကျော်ကို ခင်းကျင်း ပြသကြမယ်လို့ သိရပါတယ်။
နေရာတစ်ခုတည်းမှာ ပန်းချီဆရာ အစုံ၊ လက်ရာအစုံ ကြည့်ရမယ့်ပွဲမို့ ပန်းချီချစ်သူများ မကြည့်မဖြစ် ကြည့်သင့်တဲ့ ပွဲတစ်ပွဲလို့ ဆိုပါရစေ။ ပြပွဲချိန်ကတော့ တနင်္လာနေ့ကလွဲလို့ နေ့စဉ်နံနက် (၉)နာရီကနေ ညနေ (၅)နာရီအထိပြသသွားမည်ဟု လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်.။
ကျမ တို့ ခေါင်းဆောင်ပြောတဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ပဲ ကျမတ...
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် မဲဆောက်တွင် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ြ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၆၅) နှစ်မြောက် မွေးနေ့အမှတ်...
မော်ကွန်းဝင် ဗိုလ်မှူး မင်းလွင် ၏ ဈာပန ဓာတ်ပုံမှ...
၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် အရှင်...
ပြည်သူ့ အင်အားနဲ့နအဖအာဏာရူးတို့ ရဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကော...
စစ်တွေနှင့် မန်စီ ကားလမ်း အကြားတွင် တည်ရှိသော သဲခေ...
View People's Perspectives - Myanmar 2010 Election...
ရှေ့နေများကောင်စီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ထူး...
ယနေ့ (၁၆.၆.၂၀၁၀)စင်ကာပူနိုင်ငံ Orchard လမ်းမှာ မ...
ရခိုင်ပြည်နယ် မိုးကြီး မြေပြိုမှုအတွင်း သေဆုံးမှုမျာ...
နျူကလီးယားကိစ္စပတ်သက်ပြီး နအဖ စွပ်စွဲချက်အပေါ် ဗိုလ်...
ရန်ကုန်မြို့ တွင် ပါရမီဂိတ်ရထားသံလမ်းအကူးရထားလမ်ြး...
မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအရုံး (Generation Wave) ၏...
ရန်ကုန် Myanmar Information and Communication Tech...
မြန်မာနိုင်ငံ ၀န်ကြီးများအား အထူး တာဝန် ပေးအပ်ခြင...
မြန်မာကြယ်ငါးပွင့် သင်္ဘောသားများ ထက်ဝက်ခန့် အလုပ်ထွ...
အခြေခံကျောင်းသားများ ပညာရေး စရိတ် မတတ်နိုင်သဖြင့် ...
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး နဲ့ ပတ်သက်ဖို့ မြန်မာလူထုအကြား စ...
ဘဘဦးတင်ဦး နဲ့ ဘဘဦးဝင်းတင်တို့ ရန်ကုန်မြို့ ရှိ ...
ပန်းချီဆရာ(၆ဝ)ကျော် ပါဝင်ပြသကြမယ့် သန်းမြင့်အောင် ...
မြန်မာပြည်က စူပါမားကတ်ကြီး အချို့တွင် ကုတ်နံပါတ် မ...
Equation ညီမျှခြင်း လူထု အကျိုး ပြု လူငယ်များအဖွဲ့...
သားသမီးချင်း မိဘချင်း ကိုယ်ချင်းစာနိုင်ကြပါစေ....
၈၈ မျိုးဆက်ဖျက် ကျီးတွေရဲ့ ထင်ယောင်ထင်မှား ဒေါင်းေ...
ဟိန်းဆေးဆိုင် ပိုင်ရှင် ဦးမောင်မောင်အေးကို အမည်ပျ...
မိုးခ ပန်းချီပြပွဲ နှင့် ကိုကျော်သူ ရဲ့ ခြေတလှမ်း...